मास्को | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट ठाउँ . प्रेम . हामी . भइरहेको . सूर्य
मास्को बारेमा दन्त्यकथा intimidating को ठूलो संख्या बावजुद, प्रत्येक, जसले डर भन्दा बलियो हुनेछ, मास्को खोल्छ अन्यथा. मास्को मा छाप बस्दा केही दिन पछि, यो गृहनगर छ. उहाँले ऊर्जा तपाईंलाई भरिन्छ र नै राम्रो छ.
शहर राम्रो र यातना मानिसहरूको ठूलो संख्या छ, जो सधैं कतै चलाउन, शायद, मामिलामा. Muscovites धेरै सांस्कृतिक व्यक्तित्व थिए, सामान्य bafflement बावजुद, केही धन्यवाद हुनेछ, तपाईं एक ढोका खोल्न वा यसलाई पकड भने. हुनत, त्यहाँ केही नागरिकहरु को व्यवहार केही धेरै अप्रत्याशित आक्रमण छ.
धेरै विशिष्ट जीवन को संगठन. निस्सन्देह यी प्रविधिहरू rowed गर्ने निर्धारण गर्न. राम्रो, स्पष्ट, यो धेरै हास्यास्पद छ. बारेमा मास्को भन्न सक्छौं, शहर जीवन कि, संभवतः, नागरिक 'खर्च मा, कि यो बाँच्न. तर, जब मास्को, निकटतम राजधानी संग तुलना “भ्रातृप्रेम” एउटै मूल नामको राज्य – यसको राजधानी rots, र, यो कारक सारा देश नै मूल लागू. यो घटना को कारण स्पष्ट छन्: “टाउको देखि माछा rots”. र त्यहाँ भने देशको लागि देख छ, जहाँ तिनीहरूले जीवनको लागि Rot सक्छ, र त्यसपछि देशमा dognit मा – यो देश तपाईं अनुरूप हुनेछ. देश घृणा, षड्यन्त्र, फोहर, हिचकते वा frigid महिलाहरुको, devastation र निराश, जो फाँसी “माउस”, “spiders” र यो पालो थियो “Cockroaches” . राम्रो स्थान, जहाँ तपाईं को लागि प्रतीक्षा गर्न सक्छन्, भनेर कहिल्यै हुनेछ.
मास्को – शहर, धेरै वर्ष को लागि जो तपाईं को लागि प्रतीक्षा थियो.
पक्कै मात्र ब्रह्माण्ड
- मेरो मात्र प्रेम.
तर, पक्कै पनि, म
म यो शहर प्रेम,
र, संभवतः, उहाँले मलाई साँच्चै महंगा भन्नुभयो
(म बुझे छैन).
हामी प्रेमीहरूको बन्न सक्छ : म
र मास्को शहर.
म बिना मास्को बाँच्न सक्छ,
तर चाहे मास्को सकिनँ म बिना?..
यो पोस्ट को लागि मास्को राहदानी मलाई.
~ "* ° • र म मास्को मार्फत हिंड्न जाँदै छु • ° * "~
·0♥ ♡ म मास्को प्रेम ♡ ♥0·
ⓜⓄⓈⓀⓄⓌ मेरो मास्को ⓜⓄⓈⓀⓄⓌ
☼ AUM ₪ एक आरामदायक दूरी देखि आवाज ● •0· ˙˙